Mumwe mutyairi wendege afa, vaviri vakakuvara mujeti mbiri 'mishap'
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Mumwe mutyairi wendege afa, vaviri vakakuvara mujeti mbiri 'mishap'
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
T-38C Talon supersonic yekudzidzira jets paLaughlin Air Force Base
Iyo mapatya-injini Northrop T-38 ndiyo yekutanga supersonic kudzidziswa jeti pasi rose, uye yanga ichishanda neUS Air Force kubva 1959.
Jets mbiri dzeUS T-38C Talon supersonic yekudzidzira dzakabatanidzwa mu 'tsaona yendege' munzira yekumhanya. Laughlin Air Force Base, iri padhuze neDel Rio, Texas padyo nemuganhu weUS-Mexico, kuma 10am nguva dzemuno nhasi.
Zvinoenderana neshoko kubva Laughlin AFB, mumwe mutyairi wendege afa uye vamwe vaviri vakakuvadzwa mukati menzira 'yakaipa.'
Mumwe mutyairi wendege akafira panzvimbo. Mumwe akaendeswa kuVal Verde Regional Medical Center muDel Rio, akarapwa uye akasunungurwa. Mutyairi wechitatu apinda mu 'tsaona' ari munjodzi, uye akaendeswa kuBrooke Army Medical Center muSan Antonio. Mazita avo ari kuvharwa achimirira kuziviswa kwehama yavo.
"Kurasikirwa nevatambi vechikwata kunorwadza zvisingadaviriki uye ndinorwadziwa nemoyo wese," akadaro Colonel Craig Prather, mukuru we47th Flying Training Wing.
"Mwoyo yedu, pfungwa, uye minamato zviri nevatyairi vedu vari munjodzi iyi nemhuri dzavo."
The twin-injini Northrop T-38 ndiyo yekutanga supersonic jeti yekudzidzira pasi rose, uye yanga ichishanda neUS Air Force kubvira 1959. Yakarongerwa kutsiviwa ne Boeing T-7 Red Hawk kutanga muna 2023.